“Real Madrid wey ku ceyrin doontaa” – Van der Vaart oo u digay Gareth Bale – Gool FM
RASMI: Ole Gunnar Solskjaer oo xaqiijiyay in xiddig ka tirsan Man United uu galay xaalad karantiil ah
Agaasimaha Juventus oo ka hadlay wararka sheegaya in Cristiano Ronaldo uu Kooxda ka tagayo… (Miyuu Albaabada u furay bixitaanka CR7?)
Maxaa ka soo baxay baaritaankii Korona Fayras ee lagu sameeyey Mohamed Salah… (Miyaa markale xanuunka laga helay Weeraryahanka Kooxda Liverpool?)
Manchester City oo u dhaqaaqday saxiixa Weeraryahankii hore ee Manchester United, Romelu Lukaku
“Real Madrid wey ku ceyrin doontaa” – Van der Vaart oo u digay Gareth Bale
(Yurub) 28 Maarso 2019. Laacibkii hore xulka qaranka Holand, sidoo kale soo xirtay maaliyadaha kooxaha Real Madrid iyo Tottenham Hotspur ee Rafael van der Vaart ayaa kaga digay saaxiibkiis hore ee Gareth Bale, inay qasab ku noqon karto ka tagista Los Blancos, hadii uusan dib u helin qaab ciyaareedkiisii saxda ahaa.
Rafael van der Vaart ayaa sheegay in Gareth Bale uusan wali bixinin qaab ciyaareedkii laga doonayay marka loo fiiriyo qiimaha uu ku yimid garoonka Santiago Bernabéu, kadib markii uu kaga soo biiray kooxda Tottenham Hotspur sanadii 2013.
“Gareth Bale waxaa kaga baxdau Real Madrid qiimo dhan 100 milyan oo ginni, waxay ku bixiyeen lacag badan, sidaas darteed waa inuu bixiyaa qaab ciyaareed u dhigma”.
“Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay ee Tottenham, wuxuu tuuri jiray laadadka xor ah, wuxuu sameeyay wax walba, taasi waa waxa haatan laga doonayo inuu ka sameeyo Real Madrid”.
“Waan ogahay inay adag tahay sababtoo ah waxaa ku sugan kooxda ciyaartoy badan oo aad u wanaagsan, lakiin waa inuu sameeyaa wax badan”.
“Real Madrid waa koox aad u adag, iyadoo aan loo eegin hadii aad tahay Ronaldo, Bale ama Rafael van der Vaart, hadii aadan u shaqeynin si wanaagsan waxaa dhici doonto in ugu dambeyntii lagaa maarmo”.
Waxaa xusid mudan in xidigaha van der Vaart iyo Gareth Bale, ay kasoo wada ciyaareen mudo dhan saddex sano kooxda reer London ee Tottenham Hotspur, kahor inta uusan xidiga reer Weles u dhaqaaqin garoonka Santiago Bernabéu.